Amanqaku kaChristopher Parsons malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UChristopher Parsons
UChris Parsons waphumelela isidanga kwi-UCLA ngesidanga kuLawulo lweShishini. Ulithanda kakhulu ishishini kwaye ebesebenza njengomcebisi kwezoshishino kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ngexesha lakhe lasimahla, uphanda iindlela ezintsha zeshishini kwaye wabelana ngokuphunyezwa okufanelekileyo ngokubhloga kunye nokubonisana.
Benza njani abaSebenzi ukuba baVumise ukuHlaziywa kweDatha ekuPhuculeni ukuSebenza
NgoLwesibini, Februwari 25, 2020 NgoMvulo, Februwari 24, 2020 UChristopher Parsons
Ukuhla kweendleko kunye nokukhula kokuhamba kweendlela zohlalutyo lwedatha kuvumele nokuba ukuqala okutsha kunye namashishini amancinci ukuba onwabele izibonelelo zokuqonda okuphezulu kunye nokuqonda okuphuculweyo. Uhlalutyo lwedatha sisixhobo esinamandla esinokubanakho ukomeleza ukusebenza ngokukuko, ukuphucula ubudlelwane babathengi kunye nokuqinisekisa ukuba amashishini ayakwazi ukuchonga nokusombulula imiba enokubakho ngokukhululeka okukhulu. Ukufunda ngakumbi ngezixhobo zamva nje kunye neendlela zohlalutyo kuqinisekisa ukuba izixhobo kunye nezisombululo zangoku